Voadika ny 16 Oktobra 2017 12:06 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Oktobra 2006 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Taorian'ny tatitra vao haingana nilaza ny fihenan'ny fihanaky ny VIH/SIDA ao Zimbaboe, nifantoka tany amin'ny fiantraikan'ny fanentanana iadiana amin'ny SIDA eo amin'ny fitondran-tena sy ny soatoavina nentim-paharazana Zimbaboeana ny maso ankehitriny:
Niteraka fanehoan-kevitra mifanaritaka ao Zimbaboe ny fitarihan-dalany eo amin'ny fampiasana fimailo sy fivarotana fimailo manerantany, nisy ireo ampahany sasany amin'ny fiarahamonina nankasitraka ny fivoarana, raha ny hafa kosa mahita izany ho mariky ny “fitontonganana ara-pitondrantena”.
Zimbaboe no firenena mitarika ao Afrika amin'ny fampiasana sy fivarotana fimailon-dehilahy – nahalafo fimailon-dehilahy maherin'ny 163 tapitrisa ary fimailom-behivavy 3,8 tapitrisa tao anatin'ny dimy taona. Ny fimailon-dehilahy miisa 163 tapitrisa lafo no ambony indrindra eto Afrika, raha tarehimarika ambony indrindra amin'ny fivarotana fimailom-behivavy manerantany kosa ny fandafosana fimailom-behivavy miisa 3,8 tapitrisa.
Fimailom-behivavy mitotaly 900 000 no lafo nandritra ny taona 2005 fotsiny, maneho isa ambony indrindra isam-batan'olona amin'ny fandaharana rehetra manerantany hatramin'izao.
Saingy tamin'ny fanambarana miampanga ny tsy fisian'ny tolotra avy amin'ny Filan-kevitry ny Tanànan'i Harare, Taurai ao amin'ny Kubatana nilaza fa indraindray diso fipetraka ny hafa-panohanana fimailo,
Misy fanariam-pako ao Harare izay mampiseho dokambarotra marevaka momba ny fimailo Protector Plus. Ny ampahany amin'ny dokambarotra dia mivaky hoe, “Ny hoentin'ireo zatovo marani-tsaina”: hafatra lehibe saingy mampalahelo fa difotra fako ilay fanariam-pako izay mbola tsy nesorina nandritra ny andro maro.
Mitantara ny fibedesan'ilay mpikatroky ny demaokrasia Zimbaboeana an'ny minisitry ny raharaham-bahinin'i Afrika Atsimo tao Londra tamin'ny herinandro lasa ny This is Zimbabwe.
Mitatitra am-piesoesoana momba ny fifaninanana vaovao natao tany Angletera izay manome loka ho an'ny mpitarika mendrika indrindra ao Afrika i Bearded Man tamin'ny fanamarihana hoe “tsy ho anisan'ireo mpialoha lalana i Zimbaboe.”
Tao amin'ny Harare Diary, “mandrovindrovitra ny akanjon'ny fanekena tsy fidiny” ny mpanoratra
Raha nandehandeha teny amin'ny tohatra omaly, nilaza ilay vehivavy iray miasa ao amin'ny rihana misy ahy hoe: inona no vaovao?” Ary namaly aho hoe, arakaraka. Nanohy niteny izy hoe “rahoviana izy no handeha?”. Mazava ho azy fa “izy” = Mugabe. Ny zavatra heveriko azo valiana dia, tsy ho ela, mino aho.
Eddie Cross, manoratra ao amin'ny Enough Zimbabwe, mitantara ny fahorian'ireo mpandraharaha Zimbaboeana izay nosamborina fahatany,
Nandritra ny herinandro lasa teo, mpandraharaha lahy sy vavy an-jatony maro no nosamborina sy nogadrain'ny Polisy sy Mpiasam-panjakana hafa nandritra ny fotoana fohy. Ankoatra izay, ara-bakiteny, orinasa an'arivony no nidirana an-keriny – ny sasany isan'andro mihitsy, mba hampitahorina sy hanerena ireo mpampongady sy mpaninjara mba hampihena ny vidin'entana sy ny tombombarotra.
Orinasa iray fantatro manokana kosa nahitana ireo olona avy amin'ny Sampan-draharaham-panjakana nijanona tao amin'ny orinasa nandritra ny 10 andro mahery. Namoaka tapakila izy ireo ary rehefa nankany amin'ny biraon'ny polisy teo an-toerana ireo mpitantana orinasa mba handoa onitra “Fiaiken-keloka”, niatrika karazana fiampangàna maro tsy ara-dalàna izy ireo.
Fiampangana telo tahaka izao no hitako: -
Raharaha laharana faha-3627023 “Tolo-bidy tsy marina sy tsy ara-dalàna”
Raharaha laharana faha-3625426 “Tsy nampahafantatra vaovao”
Raharaha laharana faha-3625427 “Tsy nampiseho vidin'entana”
Tamin'ny raharaha tsirairay, 10 000 000 dolara Zimbaboeana ny onitra naloa – mora kokoa ny mandoa onitra noho ny mandeha any amin'ny fitsarana miaraka amin'izay rehetra mitranga. Miezaka mametraka an-katerena vidin'ny antsinjarany maka tombony 10 isanjato fara fahabetsany amin'ny karazan'entana ny manampahefana. Ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny varotra ambongadiny dia araka ny hevitry ny sasany – angamba 5 isanjato?